सबै भन्दा लोकप्रिय आलु प्रजाति: २०२० मौसम को "तारे" - "आलु प्रणाली" पत्रिका
वसन्तको दहमा, रोपेको अघि एकदम थोरै समय बाँकी छ, र धेरै आलु उत्पादकहरूले यस वर्षमा कुन प्रकारका शर्तहरू लगाउने भनेर निर्णय गरिसकेका छन। त्यो ठूलो माग मा छ यस समयमा हामीले कृषि उत्पादकहरूलाई एग्रोएलिएन्सी-एनएन एलएलसीको आलु सिड डिभिजनका प्रमुख अन्द्रे किसेलेभलाई बताउन भन्यौं।
- विविधताको छनोट सधैं क्षेत्र मा निर्भर गर्दछ। दक्षिणी फार्महरू (रोस्तोव क्षेत्र, क्रास्नोडार क्षेत्र) अल्ट्रा-प्रारम्भिक कोलम्बस र रेड स्कारलेट रोप्न रुचाउँछन्। अस्ट्रखान क्षेत्रमा, उही रेड स्कारलेटले राम्रो परिणाम देखाउँदछ, रिभिएरा, एरिजोना, र मेम्फिस पनि मागमा छन्। यी सबै प्रकारका तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो उत्कृष्ट फसल प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
मध्य-क्षेत्रका क्षेत्रहरूमा किसानहरू प्रायः गाला, भेगा, कोलम्बा, रेड स्कारलेट, क्वीन एनी, माडेइरा, बाल्टिक रोज लगाउँछन्।
के यो "सेतो" वा "रातो" प्रजातिहरू रोप्न बढी आशाजनक छ?
- रूसी फार्महरू “सेतो” आलुहरूलाई बढी मन पराउँछन्, विश्वास गरिन्छ कि तिनीहरू राम्रा किन्छन्। औसतमा, सेतो-गोरा प्रजातिहरूले up 75-80०% लाईपअप गर्दछ। तर रातो छाला पनि वर्गीकरणमा उपस्थित हुनुपर्दछ, त्यहाँ वर्षहरू हुन्छन् जब ती "शूट" गर्छन्।
सबैभन्दा लोकप्रिय रातो छालाको विविधता रेड स्कारलेट हो?
- हो, प several्क्तिमा धेरै वर्षको लागि। वस्तुतः यो विविध किसिमले छनौट गर्न गाह्रो हुन्छ जुन यससँग सबै पक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। यद्यपि बजारमा रोचक विकल्पहरू छन्, अवश्य। पहिले नै सूचीबद्धमा, म मेम्फिसलाई बाहिर पठाउँछु, यो रेड स्कारलेट भन्दा प्रारम्भिक होइन, तर यसले धेरै उच्च उपज, खडेरी सहिष्णुता, र दीर्घकालीन भण्डारणको लागि उपयुक्त छ। र यसका साथै यो क्रेताहरुका लागि धेरै आकर्षक छ - यो एक आलु हो जसको कफ र उज्यालो सुन्दर छाला हुन्छ।
म बाल्टिक रोजलाई पनि याद गर्दछु - यसले क्षेत्रमा राम्रोसँग देखाउँदछ, धुने लागि उपयुक्त छ, र हाम्रो देशका विभिन्न प्रकारका नेताहरूको समूहमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक अवसर छ।
र सेतो गोरा बारेमा अधिक?
- सबै भन्दा पहिले, यो गाला हो। प्रजाति व्यापक रूपमा परिचित छ, धेरै क्षेत्रहरूमा उब्जाउ। कृषि प्रविधिको विषयले उत्कृष्ट गुणको बाली प्रदान गर्दछ। आफ्नै लागि न्यायाधीश: यदि आलुको औसत बजार मूल्य ru रूबल / किलोग्राम हो भने गालाका लागि उनीहरूले -8 -१० रुबल / किलोग्राम प्रस्ताव गर्छन्। भेगा थोरै कम चिनिएको, बहु-स्तरयुक्त खडेरी सहिष्णु प्रजाति हो।
Madeira धेरै चाखलाग्दो छ: मध्यम-प्रारम्भिक बाली प्रजाति, धेरै सुन्दर - कन्दहरू उज्यालो हुन्छ, समान रूपमा अंडाकार - धुनेको लागि आदर्श।
र हो, कोलम्बा एक धेरै प्रारम्भिक विविधता हो जुन लगातार गुणस्तर प्रदान गर्दछ। आलु धुनेको लागि उपयुक्त छ, प्याकेजि inमा सुन्दर देखिन्छ, यो सधैं खुल्ला चेनहरू द्वारा बिक्रीको लागि लिइन्छ।
यो वर्ष एक धेरै तातो जाडो थियो, धेरै विज्ञहरू भन्छन् कि हामीले कीरा र रोगहरूको आक्रमणको लागि तयार गर्नु आवश्यक छ। प्रजातिहरू छनौट गर्दा यस कारकलाई विचार गर्नुपर्छ?
- बरु, तपाईंले बीज सामग्रीको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ, अन्यथा यो कुनै पनि मौसममा राम्रो परिणाममा गणना गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ।
टैग: भेगागालाकोलंबोमेडिरारातो स्कार्लेटबीउ आलु
युवा पॉकेटोहरू र मास्कोमा सुरु हुने अन्य पात्रहरूको खेती गर्ने कोसिस
बेल्जियम रसियाको एक नजर।